Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 5.25 na-abịa na njikọta maka Jitsi, ndozi maka Welcomebot na ndị ọzọ | Site na Linux
Mgbe ọtụtụ izu nke mmepe, mwepụta nke mbipute ọhụrụ nke usoro izi ozi Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 5.25 nke edobere dị ka nsụgharị LTS (ogologo nkwado version) na nke na-enye ọtụtụ ndozi ahụhụ maka nkwụsi ike ka ukwuu na nke lekwasịrị anya n'ịhụ nkwukọrịta n'etiti ndị mmepe na ndị ọrụ ụlọ ọrụ.
Maka ndị na-amaghị Mattermost, ị kwesịrị ịma nke ahụ a nọ n'ọnọdụ a dị ka ihe na-emeghe ka slack sistemụ nkwukọrịta ma na-enye gị ohere ịnata ma zipu ozi, faịlụ na onyonyo, soro akụkọ mkparịta ụka gị wee nata ọkwa na ama gị ma ọ bụ PC.
Na mgbakwunye na ya na-akwado njikọta n'ime igbe, a na-enyekwa nnukwu nchịkọta nke modulu ala iji jikọta na Jira, GitHub, IRC, XMPP, Hubot, Giphy, Jenkins, GitLab, Trac, BitBucket, Twitter, Redmine, SVN, na RSS / Atom.
1 Gịnị bụ ihe ọhụrụ na nke kacha nta 5.25?
1.1 Etu esi wụnye Mattermost na Linux?
Gịnị bụ ihe ọhụrụ na nke kacha nta 5.25?
Otu n'ime akwụkwọ akụkọ ọhụrụ ahụ adade ke ọhụrụ a version bụ mwekota na ebe a na-emeghe emeghe Jitsi maka mkparịta ụka vidiyo na ịnye ohere ịnweta ọdịnaya ihuenyo.
Nchikota a sma ọ kwụsịrị site na mmeju nke edozigoro iji ọrụ Jitsi ọha (meet.jit.si).
Maka ndị nwere mmasị ijikọ ngwa mgbakwunye, Enwere ike itinye ya na ahịa tinye wee nwee ike itinye ngwa mgbakwunye ahụ. Optionally, Mattermost nwere ike jikọọ na a onwe-kwadoro Jitsi nkesa na-ahazi iji JWT (JSON Web Token) Nyocha.
Iji malite ogbako vidiyo ọhụrụ, a na-etinye iwu "jitsi" na bọtịnụ pụrụ iche na interface. Enwere ike itinye mkparịta ụka vidiyo na mkparịta ụka Mattermost dị ka windo na-ese n'elu mmiri.
Site na ndabara, a na-eji ihe nkesa meet.jit.si maka nzukọ, mana ị nwere ike jikọọ na sava Jitsi gị ma hazie ojiji nke JWT (JSON Web Token).
Ihe nke abuo mara mma bu nwelite na nnabata Welcomebot Inye ahaziri ozi gosipụtara ndị ọrụ jikọtara nkata.
Nakwa na nsụgharị ọhụrụ a ewebata ike ihuchalu nnabata ozi na nkwado maka ijikọ ozi akọwapụtara na ọwa ọ bụla.
Finalmente ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere ya, ị nwere ike ịkpọ njikọ na-esonụ.
Etu esi wụnye Mattermost na Linux?
Maka ndị nwere mmasị ịwụnye Mattermost na sistemụ ha, kwesịrị ịga na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke ngwa ahụ na na ya download ngalaba na ị pụrụ ịchọta ngalaba maka onye ọ bụla na-akwado Linux nkesa (maka ihe nkesa).
Mgbe maka onye ahịa a na-enye njikọ maka usoro dị iche iche desktọọpụ na mobile sistemụ. Njikọ bụ nke a.
Banyere ngwugwu ihe nkesa, A na-enye anyị nchịkọta maka Ubuntu, Debian ma ọ bụ RHEL, yana nhọrọ ntinye na Docker, mana iji nweta ngwugwu anyị ga-eweta email anyị.
Nwere ike ịgbaso ntuziaka nwụnye ndị a, naanị ya dị iche na ntinye nke ngwugwu, mana na nhazi ọ bụ otu maka distro ọ bụla. Njikọ bụ nke a.
N'akụkụ onye ahịa, maka Linux a na-enye anyị ngwugwu tar.gz ugbu a (maka iji ya mee ihe na Linux). Ọ bụ ezie na ndị mmepe ahụ na-enyekwa ngwugwu ahaziri ahazi maka Ubuntu na Debian, mana n'oge a, emebebeghị nchịkọta ndị a.
N'ihe banyere tar.gz ngwugwu, kpughee ngwugwu ma mee faịlụ "desktọọpụ desktọọpụ" n'ime folda ahụ.
Finalmente maka Arch Linux agbakọla ngwugwu maka nkesa ma ọ bụ nkwekọrịta ya, n'ime nchekwa AUR.
Iji nweta ya, naanị ihe ha ga-eme bụ iji nweta nchekwa nchekwa AUR na pacman.conf faịlụ ha ma tinye ya.
Ejiri nwụnye na iwu:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 5.25 na-abịa na ntinye maka Jitsi, ndozi maka Welcomebot na ndị ọzọ
A tọhapụrụla ụdị ọhụrụ nke Zulip 3.0 na ndị a bụ akụkọ ya